BOSASO- Wararka aan ka helayno degmada Carmo gobolka Bari, ayaa sheegaya in lagu guulaystay waan waan nabadeed oo ay wadeen waxgarad, siyaasiyiin iyo qaar kamid ah culimaa'uddiinka Puntland, taasi oo xal loogu raadinayay khilaafka xooggan ee ka dhextaagan xukuumadda iyo Guddoomiyihii hore gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan.
Arrimo dhawr ah ayaa lagu hishiiyay, waxaana kamid ah; In kala qaado ciidamada islamarkaana la isu soo laabto ciidda kadib, waxaana la sheegay in arrintaasi lagu xalliyay saan saanta colaadeed ee daagnaa todobaadkii hore degmada Carmo.
Guddoomiyihii hore gobolka Bari, Sheekh Cabdixaafid Cali Yuusuf, oo la hadlayay Radio Garowe, ayaa sheegay in dadaal dheer loo galay sidii looga fogaan lahaa dhib ka dhex dahca shacabka Puntland, wuxuuna sheegay inay la isku afgartay sidii ciidamada looga rari lahaa degmada Carmo.
Cabdixaafid, ayaa xusay inay saan saan wanaagsan u muuqato islamarkaana ay rajaynayaan in wixii lakala tabanayo lagu dhammayn doon fadhi dambe, wuxuuna intaasi raaciyay in go'aanka soo baxay uusan ka amar diidi karin Cabdisamad Gallan.
Hishiiskan ayaa soo baxay xilli cabsi xooggan laga qabay isku dhac dhexmara ciidamada dowladda iyo kuwa daacadda u ah Guddoomiyihii hore gobolka Cabdisamad Maxamed Gallan, kaasi muddooyinkii dambe dhaliilayay siyaasadda madaxweyne Gaas.
BOSASO- Guddoomiyihii hore gobolka Bari Cabdisamada Maxamed Gallan, ayaa mar kale ka hadlay arrimo ku aadan gadoodkiisa iyo dhaq-dhaqaaqyada ciidamadan ee muddooyinkii dambe ka waday qaybo kamid ah gobolkaasi.
Gallan oo waraysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa kawar ...
​Puntland: Dowladda oo diyaargarow ku jirta iyo Gallan oo nawaaxiga Carmo tagay
Puntland 21.06.2016. 13:42
Gallan "Cabdiwali Gaas inta uu Puntland joogo waxaa ka badan inta uu safro"
Puntland 15.06.2016. 19:44